I-NINGBO MH YARN NOKUBHALA KWE-FACTORY yinto enye ye-Ningbo MH Industry Co., Ltd. Intambo yokuthunga kwaye intambo eluhlaza kwimveliso ye-12 iminyaka. Ngoku i-MH ineendawo ezintathu zeshishini kunye ne-120,000m2 yendawo yesityalo, abasebenzi be-1900, kunye ne-equippte kunye noomatshini obuphezulu kunye nolawulo oluchanekileyo lwemveliso, sinokunikezela abathengi ngomgangatho ophezulu kunye nokuthembeka.
Inkqubo yokuvelisa i-MH ye-MH ye-Threading yinkqubo kubandakanywa: ukucwenga intambo, ukugaya, ukuhamba, ukupakisha nokuvavanya. Umthamo wonyaka wokuvelisa i-30000 + itoni. Imveliso yethu kuquka iipolyester ezihlazileyo kunye ne-corespun ezidibeneyo kwi-nylon kunye ne-polyester ene-braids, ezifumaneka ngobukhulu obuhlukeneyo kunye neenkcukacha zokuhlangabezana nazo zonke iimfuno zabathengi. MH Intambo yokuthunga ukubonelela kubenzi behlabathi bezambatho, iibhedi, itekiti, iifashini zasemakhaya, iifashishini, ukupakishwa kunye neminye imikhonkco ekhonkcekileyo emhlabeni wonke, ukuba iyamkelwa ngokubanzi ngabathengi behlabathi jikelele abanomgangatho ophezulu kumgangatho wokhuphiswano.
I-MH ye-Embroidery Thread Industry ine-epheleleyo yomgca wokuvelisa, ukutsala, ukubunjwa nokubunjwa, okuqinisekisa ukuveliswa ngexesha elifanelekileyo kunye nomgangatho ophezulu wokuvelisa i-rayon intambo eluhlaza kunye nepolyester intambo eluhlaza, umthamo wethu wonyaka wokuvelisa yi-10000 + itoni. Ukuphakama okukhulu, amanyathelo amanyeneyo, umbala omhle, isisombululo esincinci kunye nokukhawuleza kombala yilokho esikubonelela kubathengi.